करोडौँ खोप ल्याउने ओलीको भाषण मात्रै: ज्ञवालीले ‘ब्रेक थ्रु’ भन्दै ढाँटे - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com करोडौँ खोप ल्याउने ओलीको भाषण मात्रै: ज्ञवालीले ‘ब्रेक थ्रु’ भन्दै ढाँटे - खबर प्रवाह
दुई साताअघि चीन सरकारले अनुदान स्वरुप प्रदान गरेको भेरोसेलको १० लाख खोपबाहेक अन्य देशले खोप दिइहाल्ने स्थिति छैन। कोभिड १९ विरुद्धको खोप सल्लाहाकार समिति तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कुनै पनि देशले खोप दिने जानकारी नदिएको बताएका छन्। ‘अहिलेसम्म कुनै देशबाट खोप आइहाल्ने हामीलाई जानकारी छैन,’ कोभिड १९ विरुद्धको खोप सल्लाहाकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उपे्रतीले भने।
डा. उपे्रतीका अनुसार गत माघदेखि यता नेपालमा १८ लाख भारतबाट कोभिडसिल्डको खोप आइपुगेको छ। त्योमध्येमा ८ लाख भारत सरकारको अनुदानमा र १० लाख नेपालले खरिद गरेको खोप हो। त्यसैगरी माघमै कोभ्याक्सले ३ लाख ४८ हजार डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो। चीनले चैतमा ८ लाख र जेठमा १० लाख गरी ४१ लाख ४८ हजार डोज खोप नेपालमा आइपुगेको छ। बाँकी खोप दिनेबारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि देशले सम्झौता नगरिसकेकोले खोप कहिले आइपुग्छ भन्ने विषयमा यकिन नभएको डा. उप्रेतीले बताएको नागरिकमा समाचार छ ।